Shabaab: 7 askeri ayaan ka dilnay Kenya - BBC Somali
Shabaab: 7 askeri ayaan ka dilnay Kenya
Image caption Dagaalyahada Shabaab
Xarakada shabaab ayaa sheegatay weerar lagu qaaday askar Kenyan ah oo ku sugnaa meel ku dhow xadka u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya.
Kenya waxay sheegtay in 6 askari ay dhinteen, laba kalana ay dhaawacmeen kadib weerarkan oo ka dhacay arbacaddii tuulo la yiraahdo Geerilay oo qiyaastii ilaa 10 Km u jirta xadka u dhaxeeya labada dal.
Waxay sidoo kale sheegtay in la la'yahay seddex sarkaal oo kale oo mid uu yahay guddoomiyaha degaanka.
Dhinaca kale warbixin ka soo baxday xafiiska warfaafinta ee Xarakada Shabaab ayaa waxa lagu sheegay in weerarkaasi ay geysatay kooxda shabaab, waxayna sheegtay in 7 askari oo Kenyan ah halkaasi ay ku dhishay.
Waxay sheegtay in weerarku uu jawaab u ahaa Kenya oo ciidankeeda gelisay soomaaliya muddo afar bilood ku dhow hadda isla markaasna howgallo ka wadda koonfurta Soomaaliya.